လတ်တလောမှာ ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး စမတ်ဖုန်းများ | Net Guide
Snapdragon 865 SoC သုံးထားတဲ့ Mi 10 ကို ပထမသုံးလအတွင်းတွင် ကြေညာလာမည်ဟု Xiaomi အတည်ပြု
စိတ်ဖိစီးမှုများပါက ဆံပင်ဖြူနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များ ပြောပြီ
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် သင် ကိုယ်တိုင်လည်း ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးကားပျံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်
The 10 Best New Products We Saw At CES 2020
2019 Winners And Losers : Apple, Samsung
Best Phone Camera 2019 : The Best Android And Apple Smartphone…
Top Upcoming Smartphones of December 2019
9 phones we’re excited to see in 2020
ZEDGETM Wallpapers & Ringtones
Home News International News လတ်တလောမှာ ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး စမတ်ဖုန်းများ
လတ်တလောမှာ ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး စမတ်ဖုန်းများ
အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကို ရွေးချယ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု မဟုတ်တတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့များ တခါတလေ ကိုယ့်မှာသုံးနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏက အကန့်အသတ်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ သင့်အနေဖြင့် စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးကို ဈေးနှုန်းသက်သက်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကလည်း အပြည့်အ၀ ရှိနေပါသေးတယ်။ ယခုနှစ်မှာ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းအမြောက်အမြားထွက်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဈေးကွက်မှာ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ လတ်တလောမှာ စမတ်ဖုန်းသစ်ဝယ်ယူဖို့ လုပ်နေတဲ့သူများအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်အောင် အကြံပြုရေးသားသွားပါမယ်။
(1). Xiaomi Mi9Pro
Xiaomi Mi9Pro က Mi Mix Alpha နဲ့အတူမိတ်ဆက်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ် ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi Mi9Pro မှာ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ အရာအားလုံးပါဝင်ကာ ဈေးနှုန်းသက်သာလှပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ Snapdragon 855+ အသုံးပြုထားပြီး RAM12GB ဗာရှင်းအထိရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ Mi9မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ စနစ်အများစုကို သုံးထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဘက်ထရီပိုင်းကိုတော့ မြှင့်ထားပါတယ်။ Mi9တုန်းက ဘက်ထရီ 3300 mAh ဘဲပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် Mi9Pro မှာ ဘက်ထရီ 4000 mAh ပါဝင်လာပါမယ်။
(2). OnePlus 7T
စက်တင်ဘာလ 27 ရက်နေ့ကမှ ကြေညာတဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ Mi9Pro လိုဘဲ Snapdragon 855+ နဲ့ ပါဝါထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာ 600 ဝန်းကျင်ဘဲသတ်မှတ်ထားမှုက အံ့ဩစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ OnePlus7Pro လိုဘဲ 90Hz Refresh Rate သုံးထားတဲ့အပြင် Android 10 လည်း တစ်ပါတည်းပါဝင်ပါတယ်။ UFS 3.0 Storage သုံးထားတာကြောင့့်် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာသုံးလုံးကို စက်ဝိုင်းဒီဇိုင်းမှာ ထည့်သွင်းထားကာ OIS နဲ့ Optical Zoom တို့ ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
(3). Asus ROG Phone II
Asus ROG Phone II က လက်ရှိဂိမ်းစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာ အကောင်းဆုံးဂိမ်းစမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းမသက်သာဘူးဆိုရင်ပေမယ့် ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ စနစ်တွေကကောင်းမွန်တာကြောင့် ပေးရတဲ့ ပမာဏနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာငွေပိုငွေလျှံရင် အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ ဘက်ထရီ 6000 mAh ပါဝင်ကာ 120Hz Refresh Rate သုံးထားပါတယ်။
(4). Black Shark2Pro
တကယ်လို့များ သင်ဟာ ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးလည်း လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Asus ROG Phone II ဈေးနှုန်းမျိုးလည်း မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ရှိပါသေးတယ်။ Black Shark2Pro ဖြစ်ပါတယ်။ Black Shark2Pro မှာ Asus ROG Phone II လိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ စနစ်တွေမပါဝင်တဲ့ ဘက်ထရီ 6000 mAh (ဘက်ထရီ 4000 mAh သာပါဝင်) ပေမယ့် Snapdragon 855+ အသုံးပြုထားကာ RAM12GB အထိရွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာရှေ့ကင်မရာ 20MP နဲ့ ကျောဘက်ကင်မရာ 48MP+12MP Telephoto (2x Optical Zoom) ပါဝင်ပါတယ်။
(5). Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Kirin 990 နဲ့ ပါဝါထောက်ပံ့ထားကာ Android 10 တပါတည်းပါဝင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် 3D Face Unlock လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4200 mAh ပါဝင်ကာ Reverse Wireless Charging လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Huawei အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီ ကင်မရာပိုင်းအလန်းစားပါဝင်ပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာ 20MP နဲ့ ကျောဘက်ကင်မရာ 40MP+8MP+16MP ပါဝင်ပါတယ်။ ကြိုးတပ်အားသွင်းမှုကို 40W ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကြိးမဲ့အားသွင်းမှုကို 27W ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါမယ်။
(6). OPPO Reno 2
Reno2ကလည်း ပေးရတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ ထိုက်တဲ့အရည်အသွေးမြင့် စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းက အထက်မှာရေးခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေလို အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလယ်အလတ်တန်း စမတ်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Snapdragon 730G နဲ့ ပါဝါထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်ကာ OIS နဲ့ Birght Focal Aperture သုံးထားပါတယ်။ အကန့်အသတ်မဲ့ မျက်နှာပြင်ရုပ်ထွက်သုံးထားကာ ဘက်ထရီ 4000 mAh ပါဝင်ပါတယ်။
(7). Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro က အလယ်အလတ်တန်းစမတ်ဖုန်းတွေမှာ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းစာရင်းဝင် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Helio G90T သုံးထားကာ ဂိမ်းအားပြု Chipset သုံးထားတာဖြစ်လို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4500 mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Redmi Note 8 Pro က 64MP ကင်မရာပါဝင်တဲ့ ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(8). Realme X2
Realme X2 က Redmi Note 8 Pro ရဲ့ တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ Snapdragon 730G သုံးထားကာ Helio G90T ထက် အနည်းငယ်မျှ ပါဝါနည်းပါတယ်။ ဒါ့ပေမယ့် AMOLED သုံးထားကာ 64MP ကင်မရာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် UFS 2.1 Storage သုံးထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ထူးခြားတာကတော့ ရှေ့ကင်မရာ 32MP ပါဝင်သလို ကျောဘက်ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(9). Samsung Galaxy A70s
Samsung Galaxy A70s ကလည်း ရွေးချယ်သင့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းမှာ ဘက်ထရီ 4500 mAh ပါဝင်သလို 64MP ကင်မရာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ AMOLED သုံးထားသလို 20:9 Aspect Ratio သုံးထားကာ Snapdragon 675 Chipset နဲ့ ပါဝါထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
(10). Redmi 8A
တကယ်လို့များ သင်ဟာ ဈေးနှုန်းအရမ်းသက်သာသလို ကောင်းလည်းကောင်းရမယ့်ဖုန်းကိုမှ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Redmi 8A ကိုဘဲ ညွှန်းရပါမယ်။ ဒီဖုန်းမှာဘက်ထရီ 5000 mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Snapdragon 439 သုံးထားတာကြောင့် သာမန်ဂိမ်းတွေနဲ့ App များကို ညက်ညောစွာ သုံးနိုင်ပါမယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာကလည်း 12MP f/1.8 ဖြစ်ပါတယ်။
လတ္တေလာမွာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး စမတ္ဖုန္းမ်ား
အေကာင္းဆုံးစမတ္ဖုန္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မွု မဟုတ္တတ္ပါဘူး။ တကယ္လို႔မ်ား တခါတေလ ကိုယ့္မွာသုံးနိုင္တဲ့ ေငြပမာဏက အကန႔္အသတ္နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သင့္အေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္းေကာင္းတစ္လုံးကို ေဈးႏွုန္းသက္သက္နဲ႔ ဝယ္ယူနိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကလည္း အျပည့္အ၀ ရွိေနပါေသးတယ္။ ယခုႏွစ္မွာ ေဈးႏွုန္းသက္သာတဲ့ စမတ္ဖုန္းေကာင္းအေျမာက္အျမားထြက္တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးႏွုန္းသက္သာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြေဈးကြက္မွာ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာ လတ္တေလာမွာ စမတ္ဖုန္းသစ္ဝယ္ယူဖို႔ လုပ္ေနတဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္နိုင္ေအာင္ အႀကံျပဳေရးသားသြားပါမယ္။
Xiaomi Mi9Pro က Mi Mix Alpha နဲ႔အတူမိတ္ဆက္လာတဲ့ စမတ္ဖုန္းသစ္ ဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။ Xiaomi Mi9Pro မွာ အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးမွာ ပါဝင္သင့္တဲ့ အရာအားလုံးပါဝင္ကာ ေဈးႏွုန္းသက္သာလွပါတယ္။ ဒီဖုန္းမွာ Snapdragon 855+ အသုံးျပဳထားၿပီး RAM12GB ဗာရွင္းအထိေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းမွာ Mi9မွာ အသုံးျပဳထားတဲ့ စနစ္အမ်ားစုကို သုံးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ဘက္ထရီပိုင္းကိုေတာ့ ျမႇင့္ထားပါတယ္။ Mi9တုန္းက ဘက္ထရီ 3300 mAh ဘဲပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္ Mi9Pro မွာ ဘက္ထရီ 4000 mAh ပါဝင္လာပါမယ္။
စက္တင္ဘာလ 27 ရက္ေန႔ကမွ ေၾကညာတဲ့ စမတ္ဖုန္းသစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Mi9Pro လိုဘဲ Snapdragon 855+ နဲ႔ ပါဝါေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ ေဈးႏွုန္းက ေဒၚလာ 600 ဝန္းက်င္ဘဲသတ္မွတ္ထားမွုက အံ့ဩစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီဖုန္းမွာ OnePlus7Pro လိုဘဲ 90Hz Refresh Rate သုံးထားတဲ့အျပင္ Android 10 လည္း တစ္ပါတည္းပါဝင္ပါတယ္။ UFS 3.0 Storage သုံးထားတာေၾကာင့့္္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားပါတယ္။ ေက်ာဘက္ကင္မရာသုံးလုံးကို စက္ဝိုင္းဒီဇိုင္းမွာ ထည့္သြင္းထားကာ OIS နဲ႔ Optical Zoom တို႔ ေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။
Asus ROG Phone II က လက္ရွိဂိမ္းစမတ္ဖုန္းေဈးကြက္မွာ အေကာင္းဆုံးဂိမ္းစမတ္ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးႏွုန္းမသက္သာဘူးဆိုရင္ေပမယ့္ ဖုန္းမွာသုံးထားတဲ့ စနစ္ေတြကေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ေပးရတဲ့ ပမာဏနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္မွာေငြပိုေငြလၽွံရင္ အျခားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ အသုံးျပဳနိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီဖုန္းမွာ ဘက္ထရီ 6000 mAh ပါဝင္ကာ 120Hz Refresh Rate သုံးထားပါတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား သင္ဟာ ဂိမ္းစမတ္ဖုန္းေကာင္းတစ္လုံးလည္း လိုခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Asus ROG Phone II ေဈးႏွုန္းမ်ိဳးလည္း မတတ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္နိုင္တဲ့ စမတ္ဖုန္းတစ္လုံး ရွိပါေသးတယ္။ Black Shark2Pro ျဖစ္ပါတယ္။ Black Shark2Pro မွာ Asus ROG Phone II လိုစိတ္လွုပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ စနစ္ေတြမပါဝင္တဲ့ ဘက္ထရီ 6000 mAh (ဘက္ထရီ 4000 mAh သာပါဝင္) ေပမယ့္ Snapdragon 855+ အသုံးျပဳထားကာ RAM12GB အထိေရြးနိုင္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းမွာေရွ႕ကင္မရာ 20MP နဲ႔ ေက်ာဘက္ကင္မရာ 48MP+12MP Telephoto (2x Optical Zoom) ပါဝင္ပါတယ္။
Huawei Mate 30 က ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ Kirin 990 နဲ႔ ပါဝါေထာက္ပံ့ထားကာ Android 10 တပါတည္းပါဝင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ 3D Face Unlock လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ဘက္ထရီ 4200 mAh ပါဝင္ကာ Reverse Wireless Charging လည္းပါဝင္ပါတယ္။ Huawei အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းျဖစ္တာနဲ႔အညီ ကင္မရာပိုင္းအလန္းစားပါဝင္ပါတယ္။ ေရွ႕ကင္မရာ 20MP နဲ႔ ေက်ာဘက္ကင္မရာ 40MP+8MP+16MP ပါဝင္ပါတယ္။ ႀကိဳးတပ္အားသြင္းမွုကို 40W ျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ႀကိးမဲ့အားသြင္းမွုကို 27W ျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါမယ္။
Reno2ကလည္း ေပးရတဲ့ေငြပမာဏနဲ႔ ထိုက္တဲ့အရည္အေသြးျမင့္ စမတ္ဖုန္းေကာင္းတစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းက အထက္မွာေရးခဲ့တဲ့ဖုန္းေတြလို အဆင့္ျမင့္စမတ္ဖုန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အလယ္အလတ္တန္း စမတ္ဖုန္းေကာင္းတစ္လုံး ျဖစ္ပါတယ္။ Snapdragon 730G နဲ႔ ပါဝါေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ ေက်ာဘက္ကင္မရာေလးလုံးပါဝင္ကာ OIS နဲ႔ Birght Focal Aperture သုံးထားပါတယ္။ အကန႔္အသတ္မဲ့ မ်က္ႏွာျပင္႐ုပ္ထြက္သုံးထားကာ ဘက္ထရီ 4000 mAh ပါဝင္ပါတယ္။
Redmi Note 8 Pro က အလယ္အလတ္တန္းစမတ္ဖုန္းေတြမွာ အေကာင္းဆုံးစမတ္ဖုန္းစာရင္းဝင္ ဖုန္းတစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ Helio G90T သုံးထားကာ ဂိမ္းအားျပဳ Chipset သုံးထားတာျဖစ္လို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားပါတယ္။ ဘက္ထရီ 4500 mAh ပါဝင္ပါတယ္။ Redmi Note 8 Pro က 64MP ကင္မရာပါဝင္တဲ့ ပထမဆုံးစမတ္ဖုန္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Realme X2 က Redmi Note 8 Pro ရဲ့ တိုက္ရိုက္ၿပိဳင္ဘက္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒီဖုန္းမွာ Snapdragon 730G သုံးထားကာ Helio G90T ထက္ အနည္းငယ္မၽွ ပါဝါနည္းပါတယ္။ ဒါ့ေပမယ့္ AMOLED သုံးထားကာ 64MP ကင္မရာပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ UFS 2.1 Storage သုံးထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားတာကေတာ့ ေရွ႕ကင္မရာ 32MP ပါဝင္သလို ေက်ာဘက္ကင္မရာေလးလုံးပါဝင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
Samsung Galaxy A70s ကလည္း ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ စမတ္ဖုန္းေကာင္းေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းမွာ ဘက္ထရီ 4500 mAh ပါဝင္သလို 64MP ကင္မရာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ AMOLED သုံးထားသလို 20:9 Aspect Ratio သုံးထားကာ Snapdragon 675 Chipset နဲ႔ ပါဝါေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား သင္ဟာ ေဈးႏွုန္းအရမ္းသက္သာသလို ေကာင္းလည္းေကာင္းရမယ့္ဖုန္းကိုမွ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Redmi 8A ကိုဘဲ ညႊန္းရပါမယ္။ ဒီဖုန္းမွာဘက္ထရီ 5000 mAh ပါဝင္ပါတယ္။ Snapdragon 439 သုံးထားတာေၾကာင့္ သာမန္ဂိမ္းေတြနဲ႔ App မ်ားကို ညက္ေညာစြာ သုံးနိုင္ပါမယ္။ ေက်ာဘက္ကင္မရာကလည္း 12MP f/1.8 ျဖစ္ပါတယ္။
Previous articleSamsung Galaxy A80 ကို 256GB ဗားရှင်းနဲ့လည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမည်
Next articleOnePlus 7T Vs OnePlus 7T Pro : ဘယ်စမတ်ဖုန်းကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ
author2- January 23, 2020
နည်းပညာနှစ်တနှစ်ကုန်ဆုံးသွားချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လာမယ့်နှစ်သစ်မှာရော ဘယ်လိုနည်းပညာအသစ်အဆန်း တွေနဲ့ကြုံရနိုင်လဲဆိုပြီးမျှော်လင့်မှုတွေ ထားတတ်ကြပါတယ်။ 2019 မှာ နည်းပညာလောကအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နည်းပညာပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ 2020 မှာလည်း ဒီထက်ပိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စမတ် နည်းပညာလောကဝန်းကျင်မှာပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ Samsung ရဲ့ flagship ဖုန်းတွေဖြစ်တဲGalaxy S11 နဲ့...
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများ လူတန်းစားမရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ Huawei ဖုန်းအမျိုးအစား တွေထဲကမှ Flagship ဖုန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ P20 Pro နဲ့ P20 Lite ကို ဒီတစ်ပတ်မှာ လေ့လာကြရအောင်။ Huawei P20 Pro မှာ 6.1" display နဲ့...
author 1 - January 21, 2020
ASUS ကုမ္ပဏီကနေ ၎င်းရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့် Gaming ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ ASUS ROG II စမတ်ဖုန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ 2018 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ ASUS ROG ဖုန်းကို ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Gaming...
Samsung Galaxy A20s ဟာ ဒီဇိုင်းပုံစံရိုးရှင်းလှပပြီး အရည်အသွေးလည်းမြင့်မားပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ သုံးနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Dual SIM ဆိုတဲ့ version2မျိုးကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။...
dual punch-hole display နဲ့လာမယ့်ဆိုတဲ့ OnePlus 8 Pro
Pixel Buds ၊ Pixelbook Go ၊ Nest Mini နှင့် WiFi တို့ကို...
Samsung Galaxy A51 ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ပေါက်ကြားထွက်ရှိလာ